Hatao Ahoana ny Fiainana? — Trip LEE - OFISIALY SITE
Nanana toerana tena hira toy ny hoe "Tsy ny vola na Inona na Inona,"Ary izaho nihaino Albums amin'ny anaram-boninahitra toy ny" hanan-karena, na Maty Christ est mon modèle. "Koa izany tena dia tsy mahagaga raha ny hevitra ny amin'ny fiainana tsara dia manana kitapom-batsy dia nifanizina fa tsy nety na dia akaiky. Tsy rehetra momba ny vola, anefa. Nianatra momba ny hedonism, firaisana, ny fitiavan-karena, tsy fandraisana andraikitra, hakamoana, zava-mahadomelina, ary mahazo fanajana - rehetra toy ny sekely ho ny piozila izany no fiainana tsara.
Ary ny tena olana amin'ny sary azoko izany fiainana tsara dia fa nifantoka ahy. Tena zava-drehetra momba ahy. Inona no Hataoko fa vola? Inona no Hataoko fa manaja? Inona no Hataoko fa sata? Ahoana no mihazakazaka izao tontolo izao? Izay aho nihaino sy nihinana dia bunch ny lainga. Ary rehefa mitodika ny tanora tao amin'ny radio, na dia be dia be hip-hop izay toa tsara, be izany no feno lainga momba ny zavatra tsara ny fiainana ny tena.
Aza mahazo ahy ratsy aza. Hip-hop mozika dia tsy ny olana. Ireo mpanota lainga ireo. Ny antony dia zoomed tao amin'ny hip-hop dia satria io ny kolontsaina sy ny zava-misy. I afaka efa halako hip-hop, fa mbola mety ho marina ihany sakafo ireo lainga avy amin'ny olon-kafa. Ary ny tia tena, -noana voninahitra fo nihinana azy.
Fa rehefa nihaona tamin'i Jesosy niova ny zava-drehetra. Aho Miatrika vaovao 'izao tontolo izao ny sary sy ny sary eo amin'ny fiainana vaovao. Ary toy izany koa aho tao amin'ny vaovao vao hahalala fikatsahana ny fomba hiainana ny fiainana ho voky. Tsy te hiaina ny fiainana ao amin'ny fahazavana ny lainga intsony. Tiako ny fahamarinana.
Raha manohy hino lainga momba ny ho velona, ny vokany dia lehibe. Dia tsy ho velona fotsiny safidy hafa; dia tsy ho velona ny fomba noforonina ho. Ho izahay mandany ny fiainantsika nanenjika zavatra izay tsy manan-danja. Ho Malahelo isika ny sary lehibe. Dia tsy hiaina fifaliana marina sy afa-po. Dia tsy ho velona tahaka isika dia nohariana mba hiaina. Dia tsy hiaina ny fiainana tsara.
Mazava ho azy fa tsy ny Soratra Masina dia mampiasa ny teny hoe "ny fiainana tsara." Fa rehefa miteny hoe "ny fiainana tsara" isika matetika hoe ny tsara indrindra karazam-piainana azontsika miaina. Noho izany dia te-hahazo ny tsara indrindra amin'ny izay karazam-piainana lafiny ara-Baiboly. Tiako antsika mba hiaina ny fomba noforonina hiaina. Noho izany dia te-hijery amin'ny zavatra telo ny fiainana tsara dia.
I. The Good Life velona noho ny finoana ny Tsara Andriamanitra
Ao amin'ny boky izany no mamaritra ny tsara aho, fiainana. Ny fiainana noho ny finoana ny tsara Andriamanitra. Ary aoka aho hilaza aminao ny antony.
ISIKA REHETRA velon'ny finoana
Na tsapantsika izany na tsia, isika rehetra dia ny olona ny finoana. Ny olombelona rehetra. Kristianina, silamo, Hindoa, Bodista, Agnostics, Tsy mino an'Andriamanitra - isika rehetra velona amin'ny alalan'ny finoana, miaina ao amin'ny fahazavana ny zavatra inoantsika Na izany na tsy nomena fotoana. Ireo aminareo izay atleta mampihatra tena mafy. Nahoana? Satria mino ianao dia tsara kokoa ho anao eo amin'ny fanatanjahan-tena (raha tsy mitombo no ahy ny nilalao baskety sy ny mbola ho tena ratsy). Ary ahoana ny momba izany. Ny sasany aminareo hametraka ny adiresy ao amin'ny Google Maps mba eto androany. Nahoana? Satria nino fa ny finday no hanome anareo ny marina toro-lalana. Raha nino ny findainao no namitaka anao, Mihevitra aho fa ny ahy izay no indraindray, ianao dia tsy mba nampiasa izany. I afaka handeha sy ny. Fa isika rehetra velona amin 'ny finoana.
I miresaka momba izany ao amin'ny boky. Tena ratsy aho amin'ny toro-lalana. Ny vavy foana ny fomba moana gaga aho amin'ny toro-lalana. Indray andro nandeha aho, dia nisintona an-lalana mivily any miverina, fa avy eo aho, dia niverina avy toy izany koa. tena ratsy. Mety ho tena moana hatoky ahy mba hitarika anao. Toy izany koa, isika rehetra lavo. Ny fontsika hitarika antsika amin'ny lalan-diso. Ny devoly mamelona antsika lainga, mizara azy ireo izao tontolo izao, ary ny fontsika mihinana azy. Ka raha tokony mamela ny fontsika mba hitari-dalana antsika, mila miaina amin'ny finoana ny fahamarinana.
Ary ny tsara indrindra mba hilaza aminay mikasika ny fomba tsara indrindra hiaina ity fiainana ity dia Andriamanitra Izy Tenany. Tsy fotsiny miandry azy handao fanazavana avy any an-danitra; dia mijery ny zavatra efa nanao hoe:. Ny olana dia isika mino ny lainga 'ny fahavalo ny fahamarinana' Andriamanitra.
Andriamanitra no namorona an'i Adama sy i Eva. Nahatonga toromarika ho ny fomba hiainana. Hoy izy hoe ireo afaka mihinana avy amin'ny hazo rehetra, afa-tsy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy.
Ary ny menarana dia fetsy noho ny biby hafa any an-tsaha fa nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin-dravehivavy, "Andriamanitra marina ve hoe, 'You Aza ihinananareo ny hazo rehetra ao amin'ny garden'?"Fa hoy ravehivavy tamin'ny menarana, "Afaka mihinana ny voan'ny hazo eo amin'ny saha, Fa Andriamanitra kosa nanao, 'You Dia tsy hihinana ny voan'ny hazo izay any amin'ny afovoan'ny saha, ary aza mikasika izany, fandrao ianao die.' "Fa hoy ny menarana tamin-dravehivavy, "Tsy ho faty tokoa. Fa fantatr'Andriamanitra fa rehefa mihinana azy ny masonao dia hahiratra, ka ho tahaka an'Andriamanitra, hahalala ny ny tsara sy ny ratsy. "Ary hitan-dravehivavy fa ny hazo dia tsara ho fihinana, ary izany dia mahafinaritra ny maso, ary ny hazo dia ho naniry mba hampahahendry, dia nangalany ny ny voankazo ka nihinana, ary ary nomeny koa ny vadiny izay niaraka taminy, ary dia nihinana. (Genesis 3:1-6 DIEM)
I Adama sy Eva nino ny lainga ny menarana noho ny fahamarinana 'Andriamanitra. Izany no tena olana ihany koa. Mino izahay fa izao tontolo izao rehefa milaza amintsika fa manana zavatra tsara kokoa ho atolotra noho Andriamanitra. Mino izahay fa ny nofo rehefa milaza amintsika mba hijery ny vohikala. Mino isika fa ny devoly raha hoy izy izahay eo anivon'ny rehetra izao. Mino izahay fa ireo lainga fa tsy ny fahamarinana. Ary izay no miaro antsika amin'ny fiainana tsara.
Ny fiainana tsara dia manomboka rehefa miala amin'ny fahotantsika, dia nanapa-kevitra ny handao ny tsi-fanarahana rehetra ao ambadiky ny, ary mametraka ny finoantsika an'i Jesoa. Izany no tena fiainana rehefa manomboka. Fa ny finoantsika dia tsy mifarana any. Tsy maintsy miady isan'andro hanohy ny matoky an'Andriamanitra sy mino Azy noho ny lainga ny fahavalo.
Ny finoana dia ADY AN ANDAVANANDRO
Fantatro aho tsy ny mpanota ihany no eto androany hariva. Ary matetika isika no mieritreritra rehefa manota, fa fotsiny satria nanana fotoana izao ny fahalemena. Fa izany tsy ny rehetra tantara. Olana ota rehetra dia ny finoana olana. Isika manota noho ny tsy finoana. Mino isika fa ny fahavalo ny lainga sy hankatò azy ireo fa tsy ny fahamarinana.
Koa rehefa tsy mankatò fahefana, dia satria isika mino ny lainga fa ny fahefana no hanisy ratsy isika tsy manampy antsika. Ary dia satria tsy mino an'Andriamanitra, raha hoy izy fahefana Izy napetrany eo amin'ny toerana ho an'ny soa. Ary rehefa manao firaisana alohan'ny fanambadiana, dia satria isika mino ny lainga, fa izany no fomba tsara indrindra mba hankafy ny tenantsika. Ary dia satria tsy mino an'Andriamanitra, rehefa milaza izy fa ny firaisana ara-nofo ho an'ny mpivady, ary izany ny teny manodidina izay ara-drariny izany nahafinaritra.
ao amin'ny Romana 1, Nilaza i Paoly fa ny miasa mba hitondra ny momba ny "hahatonga fanekena ny finoana" - ny fankatoavana izay mikoriana avy amin'ny finoana an'i Jesoa. Koa ahoana no hiady ho fa ny finoana? Ahoana no hiandry ny finoantsika?
MILA NY TENIN'ANDRIAMANITRA
Romanina 10 hoy i, "Ny finoana dia avy amin'ny alalan'ny fihainoana, ary nandre ny alalan 'ny Teny' i Kristy. "
Ny fiainana ara-panahy dia manomboka amin'ny finoana ny Teny ary mitohy amin'ny mitovy. Fa isan'andro isika dia ho tototry ny lainga avy amin'izao tontolo izao, ny nofo, ary ny devoly tsara? Ahoana no miady lainga? amin'ny fahamarinana! Koa eto ny ohatra amin'ny fomba fampiasana ny Tenin'Andriamanitra. Isan'andro isika hihaino ireo hafatra momba ny firaisana, tototry ny tsy madio sary, ary ny mpanota maniry fo sy mino fa ireo lainga. Noho izany dia hiady ireo lainga amin'ny fahamarinana. Inona no Tenin'Andriamanitra momba ny fitondran-tena maloto?
Fa izao no sitrapon'Andriamanitra, ny hanamasinana: fa ianao mifady ny fijangajangana; mba samy hahafantatra ny hifehy ny tenany amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny fitiavana ny fitsiriritana tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra. (1 Thessalonians 4:3-5 DIEM)
Isika dia toy ny fiara. Tsy lany ny entona isan'andro. Hanohy mandeha amin'ny finoana, mila solika. Izany solika dia ny Tenin'Andriamanitra. Raha tsy manana ny solika dia tsy mbola hatoky azy. Tsy hoe raha toa ka tsy mamaky ny Teny isika indray andro any Ho tsy mino an'Andriamanitra rehefa mifoha. Fa rehefa tsy ao aho ny Teny, Tsapako izany. Mahatsapa ny tsy finoana maka ny finoana isan-karazany lafiny teo amin'ny fiainako.
Ary tsy hiady ho an'ny finoana ny Teny ihany. Mila ny vahoakan'Andriamanitra.
Fa mifananara isan'andro, raha mbola atao hoe "anio,"Mba tsy hisy aminareo ho tonga mafy fo mba noho ny famitahan'ny ota. (Hebreo 3:13 DIEM)
Ho an'ireo amintsika ao amin'ity efitra anio alina izay mpino, inona no ny fifandraisana toy ny amin'ny Kristianina hafa? Manatrika fotsiny ve ianao am-piangonana, na manao tsara ny fotoana laninao amin'ny hafa? Ilaintsika ny tena mandeha amin'ny Kristianina hafa. Mila ho amin'ny fifandraisana akaiky. Mila ny tsirairay noho ny andraikitra. Rehefa aho niaraka ny vadiko, goavana dia nisy olona teo amin'ny fiainako mitazona ahy tompon'andraikitra amin 'ny faritra.
Raha toa ianao mametraka ny finoana an'i Kristy, tsy voatery hanome amin'ny. Ianao no afaka. Ary ianao, na mandeha amin'izany fahafahana, ianao dia ho afaka hankafy ny fiainana araka izay natao ho tia. Ho afaka hiaina ny fomba noforonina hiaina.
Noho izany dia hiady ho finoana, fa inona no mankatò, fiainana mahatoky mitovy? Inona no mijery toy ny rehefa miaina ny finoana tsara Andriamanitra?
II. The Good Life miorina Manodidina an'i Jesosy
Nisy namaky ny zavatra tany am-boalohany toy ny Kristianina izay nandrava ny sary taloha ny fiainana tsara. Ity ohatra.
Fahafatesana no ahazoako tombony
Isika rehetra dia efa nandre ny olona hiresaka momba ny maty tsindraindray. Izahay efa nandre ny olona hoe:, "Tsy misy zavatra eo amin'ny fiainana dia azo antoka fa ny fahafatesana sy ny hetra." Hoy mpanao rap malaza iray, "Miezaka aho mba nikapoka ny fiainana ', izaho tsy afaka hamitaka ny fahafatesana." Ny olona hahatakatra fa ny fahafatesana tsy azo ialana afaka. Fa ho toy ny tanora kristianina, Namaky ny andininy momba ny fahafatesana ao amin'ny Baiboly dia toy ny na inona na inona izay efa hatramin'izay nandre talohan'ny. Ny Apôstôly Paoly dia niresaka momba ny fahafatesana amin'ny fomba hafa. I Paoly hoe tsy ho faty antoka, Izy nandray ny dingana kokoa. Hoy izy, "Ny fahafatesana no ahazoako tombony." Inona!?
Ny fahafatesana dia rehefa ny atidoha, ny fonao, ary ny havokavoka manao ny asany intsony. Ny fahafatesana dia midika hoe ny fifaranan'ny fiainana sy ny fisarahana amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana. Ny fahafatesana dia midika hoe ny fiainanao ny asa ny. Tsy toy ny fitsapana hafa, fahafatesana, fa ny olona izay maty, ara-bakiteny "ny fahataperan'izao tontolo izao" - ny faran'ny ity iray ity ihany. Koa ahoana no mety ho tombony fahafatesana? Tsy afaka manao vola, raha tsy mbola maty aho? Tsy afaka ny sata kokoa rehefa maty aho. Tsy nifanaraka mihitsy taloha antonona miaraka amin'ny fomba fijery ny fiainana tsara.
Tsara mba ho ahy ny hahazo izay tian'i Paoly holazaina amin'izany teny efatra - "ny fahafatesana no ahazoako tombony" - tsy maintsy mahatakatra ny efatra izay tonga mahitsy eo anoloany. ao amin'ny Filipiana 1 Paoly manazava ny antony toa ho OK amin'ny mitoetra na velona na maty teo am-tànan'ny ny mpanenjika. Nanoratra izy eo amin'ny andininy faha 21, "Miaina dia Kristy. "Tsy ireo teny ireo, Nilaza tamiko ny apostoly ahoana ny fiainana dia tena rehetra, momba ny - tsy ny vola, tsy ny asa, tsy family - fa Jesosy. Ahoana no mety ny tia tena, sata-manahy be loatra fijery tafavoaka velona akaikin'ny izany fahamarinana?
Tsy izany anefa ny tena mahomby Na izany na tsy mpilalao fanatanjahan-tena, ny tompon-daka, rehetra manan-javatra iombonana. Manana ny mieritreritra be momba ny mandresy. Ary ny obsession, izany faniriana lalina mba handresy, trumps rehetra ny faniriana hafa ao amin'ny lalao. Noho izany indrindra ry zareo tsy voakasika amin'ny endorsements, na fanaovana ny nisongadina reels, na padding ny by MediaWiki. Azo antoka izy ireo mieritreritra izany zavatra, fa amin'ny faran'ny andro, izany tsy izay milalao ho an'ny. Milalao izy ireo mba handresy. Koa raha manana fahafahana mba hanasoavako azy, fa tsy ny ekipa, izy ireo mandalo. Fotsiny izy ireo te-handresy.
Tsara izany amin'ny lalao ara-panatanjahantena. Aoka ny hieritreritra momba ny fiainana. eo amin'ny fiainana, izany zavatra izany i Paoly no manahy be loatra momba. Izany faniriana izay trumps faniriana hafa rehetra. Izany fitiavana izay supersedes hafa rehetra ny firehetam-po dia Kristy. Tsy hoe halany ny fiainana, na fianakaviana, na ny fiononana; izany fotsiny fa ny fanomezam-boninahitra an'i Jesosy no fara tampony. Io no zava-dehibe indrindra. Ary izany mazava avy izay manoratra ao amin'ny andalan-teny.
Hoy i Paoly ao amin'ny Filipianina 1, fa afaka ho velona na ho faty; ary izy Te ho tsara, satria i Jesosy dia homem-boninahitra. ary ny andininy faha- 21 Milaza amintsika ny antony. Izy no mahafantatra zavatra. Ny velona no Kristy. Ny fiainana dia Kristy. Izahay, Izy no nahariana ny Jesosy sy ho an'i Jesosy. I Jesoa no Mpamonjy ny mamindra fo, izay nijoro teo amin'ny toerantsika ary manolotra antsika ny fiainam-baovao. Jesoa no Mpanalalana eo anatrehan'ny Ray. I Jesosy dia tsy maintsy ho ny antony manosika ho an'ny rehetra ny fanapahan-kevitra. I Jesosy ilay fiara tokony ho hery ao ambadiky ny hetsika rehetra. Izany ALL momba an'i Jesosy. Tsy misy tsara afa-tsy Jesosy ny fiainana, satria ny fiainana tsy misy an'i Jesosy tsy misy dikany. Ny velona no Kristy.
Ny fiainanao dia tsy momba anao, fa momba an'i Jesosy. Koa izany manova ny fomba izay hitantsika ny zava-drehetra.
Ahoana ny momba ny nofy sy ny tanjona? Tokony hanana nofinofy sy ny lehibe lehibe tanjona, fa izy ireo dia tokony mifantoka amin'ny Jesosy. Isika dia nohariana mba hiaina amin 'ny fomba izay mampiseho Azy ho iza Izy. Hoy i Paoly ao amin'ny Filipianina 1 fa raha velona teo amin'ny nofo dia midika lonaka miasa ho Azy.
Mikely aina NY JESOSY
Mampahatsiahy ahy ny tantara mampihomehy. Indray mandeha, Aho tany Dallas ary nankany iray ny toerana tena toerana akoho nendasina, William ny Chicken. Ny fanompoana foana koditra, fa ny akoho no tena tsara. Drive amin'ny alalan'ny asa fanompoana ratsy, fa dia mahazo eny aloha. Izy no eny amin'ny indray miresaka ary mahazo ny sainy. Ary hoy izy, "Oh, ny ratsy no nanadino ny momba anao Rahalahy. "Inona no dikan'ny hoe manadino anao? Ianao any am-piasana! Izany no ataonao any am-piasana. Ahoana no manadino ny miasa? Izy natao variana.
Toy izany koa aza, isika dia mora varimbariana. Tsy manadino ny zavatra efa natao eto mba hanao. Ary izahay tsy liana mikely aina ho Azy, toy izany ny zavatra rehetra ny mamirapiratra ny atolotr'ity tontolo misintona antsika hiala.
Miasa ho an'i Kristy dia tsy midika ilaintsika rehetra mba ho mpitory. Mila mpisolovava, rappers, mpitan-tsoratra, mpanome sakafo, ary ny fitehirizana mpitantana izay tia an'i Jesosy. Noho izany dia tsy midika fa tokony handeha hanova ny zavatra rehetra isika, na hiezaka ny hanao, na angamba izany ho. Tena dikan'ny dia, tokony ho tsara izay efa niantso antsika mba hanao toy ny mpino, ary mahatakatra ny fomba fiasa fa avy amin'ny toe-javatra tsy manam-paharoa. Tsy Ho mijery hafa eo amin'ny fiainana samihafa, fa afaka manao izany ny voninahiny.
Fantatro ny sasany mampiasa andinin-tsoratra masina mpitory diso, mba handresy lahatra antsika fa tsy misy fitsarana. Ao anatin 'ilay fomba fijery ny fiainana tsara misy antsika tao amin'i Kristy dia fiainana maimaim-poana avy amin'ny fitsapana izao. I Mahay ny zavatra rehetra - inona no tena dikan'izany? Fa na dia ny mitaiza kely aho amin'ny basket, amin'ny alalan'i Kristy aho, dia afaka ny ho iray NBA-kintana rehetra? No, I Paoly hoe na manan-karena aho na mahantra, Afa-po aho. Satria efa an'i Kristy.
Andriamanitra dia tsy mba tahaka ny sasany eto an-tany ny reny sy ny ray izay tsy manaiky isika raha tsy ianao amin'ny an-tampon'ny orinasa tohatra. Andriamanitra dia tsy mitaky sata, dia mitaky ny fahatokiana.
Fanamby aho, rehefa namaky ny tenin'i Paoly, indrindra fa ny fandinihana ny toe-javatra i Paoly. I Paoly eo afovoan'ny ny toe-javatra mahatsiravina. Fa ny family mahita izany amin'ny alalan'ny fanovana ny zava-drehetra. Ny velona no Kristy dia ny family mahita ny fitsarana amin'ny alalan'ny.
Indraindray isika dia hanipy ny mety toy ny zaza eo amin'ny fitsapana, satria mieritreritra toe-javatra rehetra dia momba antsika. Heverinay ary mitaraina amin 'ny namana, momba ny tsy ara-drariny izany, sy ny sarotra izany. Apetraho lehibe isika tezitra tantrums satria mieritreritra ny toe-javatra misy farany momba antsika hoe aina. Fa tsy ry zareo. Ry zareo momba an'i Jesosy. Izahay hitolona amin'ny alalan'ny fitsapana hafa, raha raha tokony mifantoka amin'ny fomba tsy mahazo aina isika hifantoka izahay mba hanomezam-boninahitra ny fomba Jesosy teo afovoany izany. Izany no fiainana tsara.
Fananganana ny fiainanao ve manodidina Jesosy holazaina fa tsy maintsy ho mankaleo, na tsy misy fifaliana? Tsia mazava ho azy. Fantatro ny lainga tsara tarehy toa kokoa indraindray, fa ny marina no misy maty farany. Izany dia midika hoe mitifitra ambany loatra. Ny fanarahana an'i Jesosy dia tsy midika fa tsy mahafaly antsika ny zavatra, midika izany fotsiny isika hifaly mandritra izany fotoana tsara. Raha tokony mitarika ho ratram-po dia mitarika ho amin'ny tsy fifaliana.
Ny zavatra rehetra dia tsara kokoa raha eo amin'ny teny manodidina Nahafinaritra dia natao. Namana mahafinaritra kokoa, rehefa naorina manodidina azy. Roa voavela heloka ny olona mamela ny tsirairay, izay mahatonga fisakaizana mamy. Afaka ny ho afaka ny ho tia vola, rehefa tsy mivavaka izany.
Ny fifaliana dia tsy haharitra. Ireo izay manorina ny fiainany zavatra very maina nanolo-tena ho amin'ny fandringanana. Fa ireo izay manorina ny fiainany i Kristy dia afaka tsy ho rava. Tena fanomezana avy amin'Andriamanitra ka tsy halaina.
Noho izany dia manana tsipiriany sasany momba izany fiainana tsara, fa aiza kosa no avy? Ahoana no mahazo izany?
III. The Good Life dia fanomezana avy Amin'Andriamanitra Fitiavana
Tian'Andriamanitra ianao mba hiaina ny fiainana tsara. Izy no namorona anao mba hiaina ny fiainana tsara. Ny fahotana no niaro antsika tsy izany. Ny lainga dia Efa nolazaina dia ny hoe Andriamanitra te hiaro antsika amin'ny fiainana tsara. Toy Tiany isika mba ho kivy sy malahelo avy amin'ny fifaliana rehetra. Fa izany no mahatsikaiky.
Izy tia antsika loatra fa na dia nanota ka dia tafasaraka Aminy, Nandefa an'i Jesosy, mba ho antsika ny manana izany. Izahay tapaka avy amin 'Andriamanitra, ny loharanon'ny soa rehetra.
Nisy fahasamihafana maro eo amin'ny sary ny fiainana tsara nianarako avy Paul, ary ny sary nianarako avy amin'ny kolontsaina. Fa iray amin'ireo fahasamihafana lehibe indrindra dia ny fomba tonga any. Izao tontolo izao mivarotra antsika ny "fiainana tsara" izany isika mba hahazoana. Ary na dia ho an'ny sasany izay miasa ny sarotra mba hahatratra azy, dia mbola any amin'ny toerana lavitra. Fa ny sary ara-Baiboly ny "fiainana tsara" dia tsy mitovy. Tena fanomezana maimaim-poana izany misy rehetra.
Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Ary izao no tsy avy aminareo izany; izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy noho ny asa, mba tsy hisy hirehareha mety. (Efesianina 2:8-9 DIEM)
ao amin'ny Jaona 11, hoy i Jesosy, "Izaho no fananganana ny maty sy ny fiainana. Na iza na iza mino Ahy, na dia ho faty, dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay. "Izany no vaovao tsara.
Matoky an'i Jesosy dia midika hoe isika indray amin'Andriamanitra, izay vaovao mahagaga satria natao mba hahazoana. Izahay vao mahazo hankafy Azy ankehitriny, ao amin'ny Teniny. Tianay mijery fanatanjahan-tena, ary lehibe mpanakanto satria mankafy lehibe. Tsy misy lehibe noho ny Andriamanitra lehibe izay nahary azy ireo. Ny fahalehibiazany mahatonga azy mijery malemy fanahy aza.
Izany no nahatonga an'i Paoly afaka miteny hoe "ny fahafatesana no ahazoako tombony,"Satria na maty na velona, Jesosy dia homem-boninahitra. Ny fiainana dia midika fa mahazo ny hanompo an'i Jesosy sy ny fahafatesana dia midika fa mahazo ho niaraka tamin'i Jesosy - ary misy na aiza na aiza dia aleo ho (Filipianina 1:23). Afaka mianatra avy Paoly eto. Ny marina dia, fa tsara kokoa ny ho vovoka mahantra eo anatrehan 'i Jesoa toy izay ho maloto manan-karena eo anatrehan'ny olona.
Moa ve ianao maniry ny niaraka tamin'i Jesosy? Isika dia tsy ho afaka ny hilaza ny fahafatesana no ahazoako tombony, mandra-tena tia an'i Jesosy. Ve ianao tia Azy mihoatra noho ity fiainana ity? Salamo 73. Ny hany fomba hahazoana misy ny mijery azy ao amin'ny Teniny sy avy amin'ny zavatra fihodinana io rahona ny fahitana. Ny sasany amintsika manontany tena hoe nahoana isika no tsy tia an'i Jesosy bebe kokoa, fa mifikitra amin'ny zavatra izay manakana antsika tsy akaiky aminy. Miverena ary miezaka ho ao aminy. Koa izany ny ady amin'ny finoana.
Afaka miaina ny fomba noforonina hiaina.
Raha tsy nahita marika sary vaovao ny fiainana tsara aho, dia ho very foana ny fiainako misambo-zavatra izay tsy manan-danja. Fa noho ny fahasoavana Andriamanitra naneho ahy ireo teny efatra: ho velona dia i Kristy. Ary nomeny ahy ny miaina fahasoavana amin'ny alalan'ny finoana tsara Andriamanitra.
Inona no atao hoe tsara? Iza no mamaritra ny tsara? Andriamanitra no. Tsara ny manome voninahitra an'i Jesosy sy miaraka Aminy. Raha mbola ho nino ny lainga ny kolontsaina niteny tamiko, Aho, tsy ny fiainana ny fiainana tsara. Fa rehefa nanomboka ivelomako amin'ny finoana ny tsara Andriamanitra, tsara ny fiainako nanomboka. Nanomboka nahita ny tsara ainy ho aina indray Jesosy, entin'ny Jesosy, sy niaina ny voninahitr'i Jesosy. Ny olona izay velona ho an'ny tenany mahazo na inona na inona maharitra eto amin'ity fiainana ity, dia manimba ihany no hahatsapa fatiantoka ao amin'ny manaraka. Fa ny olona izay velona ho an'i Kristy mahazo ny tsirony ny fiainana tsara ankehitriny, ary ny fahafatesany ihany no mitondra Azy zavatra maniry tena.
sheyi • Aogositra 20, 2013 amin'ny 11:39 PM • navalin'i
Ny fitahiana lehibe izany efa ho ahy. Ny Tompo dia vao namaly ny vavaka nataoko. Amen
Bman • Novambra 15, 2013 amin'ny 2:00 aho • navalin'i
Izany no tena nisy maso fanokafam-.thnx